နားခိုရာ: October 2008
အခုတလောမှာ ရာသီဥတုက ပူလောင်အိုက်စပ်နေပြီး Aircon ဖွင့်မယ်ဆိုတော့လဲ မီးအားက 120 130V လောက်ပဲအ၀င်ရှိနေတော့ မီးအားမြှင့်စက်ကလဲမနိုင်။ တိုက်ခန်းကလဲ အပေါ်ဆုံးထပ်ဖြစ်ရတဲ့အထဲ ညာဖက်တိုက်နံရံကို ကျနေတိုက်ရိုက်ထိုးတော့ ညနေပိုင်းနေ၀င်ပြီးရင်တောင် အိမ်ခန်းထဲမှာ အပူငွေ့တွေက လှောင်လို့ .. သားလေးက ပူရင်နဲနဲမှမနေ.. ချွေးတွေတလုံးလုံးနဲ့ မျက်နှာလေးကနွမ်းလို့။
ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်သုံးရက်က မုန်တိုင်းရှိလို့လားမသိ... မိုးတွေ သဲကြီးမဲကြီးရွာပြီး ရာသီဥတုက အတော်လေးကို အေးနေတယ်။ ဒါနဲ့သူ့ကို ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲမှာ ဖျားသွားမှာစိုးတာနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေးလေး ၀တ်ပေးထားရတယ်။ အဲဒီလို မိုးအေးအေးမှာ သားလေးကတော့ ဇိမ်နဲ့ကို အိပ်တော့ တာပဲ။ တင်ထားတဲ့ပုံလေးက သူအိပ်ယာက ပြန်နိုးစအချိန်လေး။
မနက်ဖက် မိုးအေးအေးမှာ သားလေး ဇိမ်နဲ့အိပ်နေတာမြင်တော့ ကိုယ်တောင် ရုံးလစ်ပြီး အိပ်ယာထဲဝင် စောင်လေးခြုံလို့ ပြန်ကွေးချိန်စိတ်တွေပေါ်လာမိသေး :D
Posted by little moon at 5:19 PM2comments:
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က mail ပို့လိုက်လို့ ကြည့်ဖြစ်တဲ့ site လေးတစ်ခုပါ။ စိတ်ဝင်စားရာ ကောင်းတဲ့ site လေးတစ်ခုလို့ပဲ ညွှန်းချင်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ လာမဲ့ နိုဝင်ဘာ ၄ရက်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ သမတအသစ်ကို ရွေးကောက် တင်မြှောက်ကြတော့မှာပါ။ အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံလုံးက ကျောင်းသားလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ဖြစ်လာတော့မယ့် သူတို့ရဲ့ သမတအသစ်ထံကို ပေးပို့ကြတဲ့စာလေးတွေပါ။ သူတို့သိချင်တာလေးတွေမေးမြန်းကြမယ်၊ သူတို့ပြောချင်တဲ့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ topic တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးမယ်၊ သူတို့အနေနဲ့ အနာဂတ် အမေရိကားကို ဘယ်လိုဖြစ်စေခ်ျငတယ်ဆိုတာတွေကို ပြောကြမယ်။ တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့အလေ့အထလေးပါ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို စိတ်ဝင်စားကြတာ ...
ဟိုးအရင်ကတည်းက အမေရိကန်သမတများကို ကလေးငယ်များအပါအ၀င် ကျောင်းသားလူငယ်များက စာရေးသားပေးပို့လေ့ရှိကြပြီး သမတများကလည်း အချိန်ရရင်ရသလို တလေးတစား စာပြန်ကြားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ အခု အင်တာနက်ခေတ်ရောက်လာတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ ရေးသားပေးပို့နိုင်သလို လူငယ် အများစုက ဘယ်လို topic တွေကို စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာကိုလဲ လေ့လာဖတ်ရှု နိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရွှေနိုင်ငံက လူငယ်လေးများရော ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ရောက်မှ ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေ ရကြမလဲ ....
Posted by little moon at 12:32 PM2comments:
Posted by little moon at 11:05 AM 16 comments:
Posted by little moon at 10:40 AM3comments:
Posted by little moon at 5:18 PM 1 comment:
Posted by little moon at 11:53 AM3comments:
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ (ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့ပဲပေါ့) ညနေပိုင်းမှာ People magazine က လုပ်တဲ့ Miss People ပြိုင်ပွဲလေးကို သွားဖြစ်သေးတယ်။ ကိုခရုက ဖိတ်စာနဲ့ လက်မှတ်လေးပို့ပေးတာကြောင့်ရယ်၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အပျင်းပြေ သွားကြည့်ချင်တာကြောင့်ရယ်နဲ့ ရောက်ဖြစ်တာ။ ဘွဲယူပြီး အိမ်ခဏပြန် ရေမိုးချိုးပြီးတော့ အလုပ်ကိစ္စလေး နည်းနည်းဖြတ်ပေးဖို့ ရုံးသွားတယ်။ သူ့ပွဲက ညနေ သုံးနာရီကစတာ။ မြို့ထဲ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း အောက်ဆုံး ဘလောက်က Strand Hotel မှာ။
အဲဒီကပြီးရင် MBA ဘွဲ့ယူ Dinner ဆက်သွားမှာမို့ Camera လေးယူလာတယ်။ ဒါနဲ့ ပုံလေးတွေ ဟိုရိုက် ဒီရိုက်ပေါ့၊ ဒီလိုပွဲမျိုးကို ရိုက်ဖို့ကြတော့ ကိုယ့် Camera အသေးလေးက လုံးဝကို အဆင်မပြေတာ။ အနည်းဆုံး D40 D60 လောက်နဲ့ ရိုက်ရရင် မဆိုးဘူး။
Dinner ဆက်သွားရမှာမို့ အပြီးအထိ မကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူ Miss People ဖြစ်သွားလဲတောင်မသိပါဘူး။
Posted by little moon at 10:18 AM 1 comment:
Posted by little moon at 12:31 PM 12 comments:
Posted by little moon at 10:14 AM4comments:
မိုးကုန်ပြီ။ မိုးကောင်းကင်သည် သူ့မျက်နှာတွင် ပေကျံနေသော တိမ်စတိမ်နများကို သန့်ခဲ့ပြီ။ ကောင်းကင်သည် ပြာလဲ့လဲ့။
နေသည် ရဲရဲပေါ်ခဲ့သည်။ ယခင်က မိုးတိမ်များကို ဦးစားပေးခဲ့ရသည်။ ၀င်းပပ ရောင်ခြည်တို့ကို ခဏ ရုပ်သိမ်းခဲ့ရသည်။ အားရှိသော နေမင်း၏ မျက်နှာသည် တိမ်တို့၏ နောက်တွင် ပုန်းနေခဲ့သည်။ သူ့အခါမှာ သူစိုးမိုးပါစေ။ မိုးအခါမှာ မိုးရွာချင်ပေမည်။
'အလည့်' သို့မဟုတ် 'အခါ' သည် ရှိစကောင်း၏။ အရာရာတိုင်း၏ တန်ဖိုးသည်အလှည့်ကို မှီ၍ သို့မဟုတ် 'အခါ' ကိုမှီ၍ တည်တတ်ပေ၏။ ယင်းသို့ အခါသင့် အလှည့်ကြုံလျှင် သူတို့၌ အစွမ်းဟူသည် ရှိကြပေသည်ပင်။
နေမင်းသည် သူသာလျှင် အားကြီးသူဟု မအောက်မေ့။ သူ့အလှည့်သာလျှင် ထာဝစဉ် ရှိရမည်ဟု မတောင်းဆို။ သူ့အခါသာလျှင် အမြဲတည်ရမည်ဟု မထောင်မလွှား၊ မိမိ၏ နေရာကို အလိုက်သိစွာ ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ပေ၏။ မိုးညိုပါစေ၊ မှိုင်းပါစေ၊ ဆိုင်းပါစေ၊ ရွာပါစေ။
ယခုကား မိုးအလှည့်ကုန်ပြီ။ မိုးအခါဆုံးပြီ။ နေမင်းရောင်ခြည် ဖြာဦးအံ့။ နေခြည် မြူးဦးအံ့။ ဤသို့တွေးလျက် တောင်ထိပ်ပေါ်မှ နေမင်းထလိုက်စဉ် နေမင်း၏ ရှေ့၌ နှင်းမှုန်များ ရောက်လာကြကုန်၏။
သြော် ... ဆောင်းအလှည့်ပေတကား။
Posted by little moon at 2:41 PM No comments:
Posted by little moon at 2:29 PM No comments:
Posted by little moon at 2:26 PM 1 comment:
Burmese Health Authority Warning: All men are advised not to suck China girl's breasts as the milk may contain melamine!
hee he :D
Posted by little moon at 5:32 PM 1 comment:
ဒီနေ့ 6-Oct-08 မှာ သားလေး ၂လတိတိပြည့်ပြီ။ SSC ဆေးရုံက ၂လပြည့်ရင် မွေးစာရင်းလာထုတ်ပါတဲ့။ သွားထုတ်ရဦးမယ်။ သားလေးကျန်းကျန်းမာမာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေတာကိုပဲ ၀မ်းသာနေရတယ်။ တစ်ခုပဲရှိတယ် ဒီရက်ပိုင်းရာသီဥတုက ပူလွန်းတော့ သူနေရထိုင်ရာ ခက်ပုံရတယ်။ Aircon ကလည်း ပူတဲ့အချိန်တွေမှာ မီးအားက အ၀င် 135 140V လောက်ပဲရှိတော့ Regulator ခံသုံးတာတောင် မနိုင်ဘူး။
ဒီမနက် Sony Cybershot Camera ရဲ့ Smiling shutter နဲ့ စမ်းရိုက်ကြည့်ထားတာ။ အရင်က phone handset က camera လေးနဲ့ပဲ ရိုက်နေတာဆိုတော့ ပုံတွေ သိပ်မကောင်းဘူး။ ဒီ Camrea လေးကလည်း သားသားကို ရိုက်ပေးဖို့ ၀ယ်လိုက်တာ။ DSC W-130တဲ့ 8.1 mega pixel ရတယ်။ 4x optical zoom. Memory 2GB ထည့်ပြီးသားကို ၃သိန်းနီးပါးလောက်ပေးရတယ်။ အပျော်တန်းရိုက်ဖို့ပဲဆိုတော့ သုံးလို့ကောင်းပါတယ်။
သားလေးက ရယ်တတ် ပြုံးတတ်လာပြီ။ သူ့ဘေးမှာ စကားတွေပြော ပြုံးပြ ရယ်ပြရင် သူကလဲ ၀ူးဝူးဝါးဝါး နဲ့ပြန်ပြောရင်း ပြုံးလို့ ရယ်လို့။
Posted by little moon at 9:33 AM9comments:
Posted by little moon at 9:00 AM 1 comment:
Ah Beng is filling up an application form forajob. He supplied the information for the columns on Name, Age, Address etc. Then he comes to column on "Salary Expected", but he is not sure
of the question. After much thought, he writes " Yes "
Ah Beng had just boughtanew computer and was using it. When he encountered some problems, he decided to use the 'Help' command after some tries. Soon after, he became very irritated and called the computer retailer for support.
"It took me5mths to complete it", Ah Beng brags.
forward email from Dr. Thant
Posted by little moon at 3:23 PM2comments:
Posted by little moon at 1:13 PM2comments:
Posted by little moon at 10:59 AM 29 comments: